Photos beddelashada ka iPhone in Lugood waa hab aad u fudud oo toos ah oo aan kaliya badbaadiyay waqti iyo dadaal laakiin sidoo kale in la hubiyo in xogta la hayo aamin waqtiga oo dhan. Si ay u isticmaalaan arrin ku ool ah user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in nidaamka halkan ku xusan tutorial tani waxaa raacay talaabo talaabo ah oo aan gefo wax si aad u hesho natiijooyinka si degdeg ah oo wax ku ool ah.
Qaybta 1aad: Sida loo sawiro ka iPhone wareejiyo Lugood?
Qeybta 2: FAQ ku saabsan Lugood
1. iPhone waa in lagugu xiro computer ka dhex cable USB ah si aad u hesho socda habka.
2.Launch software Lugood ah taas oo uu leeyahay nooca ugu dambeeya kaas oo sidoo kale lagala soo bixi karaa website-ka rasmiga ah ee Apple. Marka samaysay abuurtaan barnaamijka oo la helo qalabka ee guddiga bidix ee barnaamijka.
3.Once qalabka ayaa ku taala iyo riixi qaybaha muuqan doonaa hoose iyo user leeyahay in uu doorto mid ka mid ah ayaa doonay inay u hagaagsan ku jira.
4.The user u baahan tahay in ay doortaan shaqsi isha si ay awood doorasho syncing. Tan waxaa la samayn karaa adiga oo riixaya badhanka u hagaagsan ee geeska hoose ee saxda ah ee sanduuqa wada hadal ah oo u muuqata. Waxa kale oo buuxin doona nidaamka.
1 FAQ: Lugood xayiran on sawiro degida
Geedi socodka waa run ahaantii fudud oo la raaci karaa qof kasta si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo arrintan la xiriira. Ka dib markii yihiin tallaabooyinka arrintan la xiriira.
1. Lugood waa in gebi ahaanba inuu ka tago.
User 2.Beerta markaas u baahan yahay in ay tirtirto ka ~ / Sawiro / iPod Photo Cache si loo hubiyo in safaysaa Cache.
3.Browse oo booqasho ~ / Sawiro / iPhoto Library.
4.Hold hoos u muhiim ah Ctrl iyo riix badhanka mouse si waxyaabaha baakada ka muuqan.
5.Locate iyo tirtirto Photo iPod ka Cache maktabadda gudahood si uu u dhameystiro process.Sync ka iTun ah.
6.es mar kale si loo hubiyo in hannaanka dhameystiray.
2 FAQ: Lugood: Ma awoodo in uu u hagaagsan sawiro
User ayaa sidoo kale raaci kartaa habka la soo sheegnay ee https://support.apple.com/en-us/HT204545 si aad u hesho natiijooyinka. Si kastaba ha ahaatee tutorial waxa uu safeeyey tallaabooyinka sii.
1. user waa inay ku dadaalaan si ay u isticmaalaan computer la mid ah in loo isticmaalo in lagu hagaagsan content sida caadiga ah si ay goobaha ay weligood badala.
2.After xulashada qalabka ka guddi bidix user ay u baahan tahay in guji sawiro ka dibna dami syncing ah. Waa in la ogaadaa in dhammaan photos synced laga tirtirayaa qalabka.
3.Beerta user booqan kartaa http://www.apple.com/itunes/download si loo hubiyo in nooca ugu dambeeya ee Lugood la soo bixi.
4.By socda habka ku xusan user mar kale u hagaagsan kartaa sawirro iyo in la hubiyo in arrinta la xalin.
3 FAQ: Akownnada la sawiro arrinta ku iPhone 6 / 6s marka la Lugood synced
Si aad u hesho xal ah si caddaalad ah oo fudud user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in geedi socodka soo socda waxaa la socda in arrintan la xiriira si ay arrinta aan lagu xalin kaliya laakiin sidoo kale dhibaatada la saxo in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Waxa kale oo hubin doona in mustaqbalka xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin.
The saldhigyo kamaradaha iPhone waa sida soo socota:
1.On iPhone: qaadey goob: OFF
2.On iPhone: sawir ku qaad
iphoto 3.On: Si toos ah dhoofsadaan photos
4.On Lugood, sawiro hagaagsan ka iphoto
5.On Lugood, hagaagsan
Dhibaatadu waxa ay sidoo kale arrinta been talaabada 3 halkaas oo Lugood waxaa la faray in ay si toos ah u dajiyaan oo dhan sawirada ku jira oo iphoto ah. Tani waxay sidoo kale keenaysaa in La'aanta gaadhsiin meesha user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in sawiro laga keeno ayaa la tirtiray ka iphoto ah. Si loo xalliyo arrinta user ay u baahan tahay in la beddelo goob iii si loo hubiyo in nuqul ama sawiro hore u soo dhoofiyo ayaa la tirtiro liiska camera iyo arrinta la xalin danta ugu fiican ee user.
4 FAQ: Photos ka mid ah si Dhacdooyinka ka dib markii macruufka 9 update
Tani waxaa loogu yeedhi karaa sida cayayaanka ah in la soo wariyay in ay Apple dhawaan iyo sabab la mid ah ku dhiirigelinayaan in ay ku jiraan waa in go'an arrinta. Si ka soo user ka abuuri karaan dhacdooyinka gacanta sida Lugood u weydiiso dadka isticmaala ay ku darto dhacdooyinka mar photos yihiin synced. User waa bilaabi abuuro dhacdo in ay tahay in la tusay hore, ka dibna labaad iyo liiska si loo hubiyo in sawiro ay sii si uu aado. Sidaas dhacdooyinka la gelin doonaa si sawirro ku yaalaan on iPhone ama qalab kale Apple kasta oo arrinta la xalin doono ilaa arin joogto ah oo aan posted by Apple lafteeda.
5 FAQ: Lugood sii wadaan in ay muujiyaan 5 + GB isticmaalka xogta sawir ka dib oo dhan photos ayaa la tirtiray
User ayaa loo hubiyo in talaabooyinka soo socda la raacay si ay u hubiyaan in dhibaatada la waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira ka dhigi kartaa:
1.Access goobaha ee telefoonka in la bilaabo habka.
taariikhda 2.Beerta iyo codsiga waqti ka dibna waa in la heli.
3.Against goobaha user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in "Calan toos ah" uu dansan yahay.
4.Now user ay u baahan tahay in la beddelo taariikhda in maalin maalmaha ka weyn, tusaale ahaan, haddii taariikhdaasi ay tahay 14-ka June 2014-ka dibna user u leeyahay in wax laga beddelo in 14-kii June 2013. Waxaa sidoo kale in la xusay in taariikhda lagu bedeli doonaa marka nidaamka ayaa ku dhameysatay.
5.After ku dhow codsiga taariikhda user ay u baahan tahay in la hubiyo in app sawiro la heli ah.
6.After xulashada albums ah user ku arki kartaa in ay jiraan kumanaan sawirada waxaa laga heli karaa gudahood codsiga.
7.These waa loo yaqaan photos phantom iyo user ay u baahan tahay in ay tirtirto oo dhan oo iyaga ka mid ah si loo hubiyo in arrinta ayaa go'an.
Barnaamij kasta software in uu soo bandhigayaa shaqeynayaan sida waxaa xaqiiqo ah loo tixgeliyaa sida boon ah ee dhammaan dadka isticmaala kuwa raadinaya in ay helaan shaqo lagu sameeyey hab fudud oo degdeg badan. Wondershare TunesGo Retro ayaa kaalinta sida software ugu sareeya ee arrintan la xiriira ay sabab u tahay soo bandhigidda laga cabsado iyo user saaxiibtinimo interface. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah isticmaalaya barnaamijkan waa sida soo socota:
tayada 1.Original sawirro weli.
2.It nabdoon tahay shabag daruur lahayn.
3.It hantiyi farsamada ee suuqa kala iibsiga Dufcaddii oo uu tashiilo waqtiga
4.It sawiro laga wareejin karaan Photo Stream, Photo Library iyo Photo Album
5.It wareejin karaan video, music iyo faylasha kale warbaahinta la mid ah.
Geedi socodka waa in la raaco arrintan la xiriira ayaa Caddaynay marka ay timaado tallaabooyinka hoos ku xusan.
1. user soo bixi kartaa barnaamijka ka URL http://www.wondershare.com/mac-ios-manager/ oo ku xidh. Marka la sameeyo user markaas u baahan yahay in la hubiyo in software la furay.
Doorasho 2.Beerta ee Lugood markaas waa in la soo xulay in ay sii wadi.
3.On suuqa kala socda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in button bilowga la isku soo riixayo in la bilaabo geedi socodka asaasiga ah iyo sidoo kale in ay ku dhameysan habka sidoo.
> Resource > Lugood > Sida loo sawiro ka iPhone wareejiyo Lugood